Cimiladu waxay soo jeedinaysaa Qalab Qaadista Shabakada Wanaagsan
Qalabka Spider Spider Tool waa diiwaan gaaban oo cusub, bogagga shabakadaada iyo waxaad ka qaadataa waxyaabaha muhiimka ah ee kuugu jira, taasoo kuu sahlaysa inaad ku falanqeyso boggaaga iyo bogga bogga ee SEO. Waxaad barnaamijka u soo dejisan kartaa bilaash ama doorasho qorsheha caymiska si uu uga faa'iideysto sifooyinka sare.
Maxaad ku sameyn kartaa Qalabka Mashiinka SEO?
Si ka duwan sida xogta kale ee caadiga ah ee la naaquso ama barnaamijyada soo saaridda, SEO Spider Tool waa mid dabacsan, degdeg ah oo sahlan oo loo isticmaalo, wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad falanqaynta natiijooyinka waqtiga dhabta ah. Waxay ururisaa xogta, u oggolaanaysa madax-dhaqameedyada in ay sameeyaan go'aano xog-ogaal ah. Qaar ka mid ah faa'iidooyinkeeda ayaa lagu sharxay hoos.
1. Raadi Xiriiro khaldan
Isticmaalida Qalabka Spider Spider Tool, waxaad ka heli kartaa shabakadaha jaban ee boggaaga internetka oo kuu fududee naftaada si aad u degto boggaga internetka. Barnaamijkani wuxuu si deg deg ah ula socdaa isla markaana wuxuu raadiyaa xiriiro sida 404. Waxaa intaa dheer, wuxuu dayactirayaa xidhiidhada jaban wuxuuna kaa caawinayaa helitaanka qaladka serverka. Sidaa darteed, SEO Spider Tool waa mid dhan-in-mid ka mid ah soo saaridda xogta iyo qalabka web crawling. Waxay raadineysaa URL-yada oo ay kuugu dejinayaan si deg deg ah.
2. Falanqee bogga Titles iyo Meta Data
Waxaad si sahlan u falanqeyn kartaa cinwaanada iyo metadata inta lagu jiro geedi socodka hawsha. Nidaamka Spider Spider wuxuu kormeerayaa tayada sharaxaadda meta waxayna tilmaamaysaa khaladaadka, ereyada maqan, khadadka gaaban ama dheer ama waxyaabo la duubay oo ku jira boggaaga.
Hadda waxaad si fudud u ururin kartaa xogta HTML ee bogagga shabakadda adoo isticmaalaya qalabka Spider Spider Tool. Waddada CSS iyo XPath waxay shaqadaada ka dhigtaa mid sahlan oo ka fiican tan kale ee la midabtarrada iyo barnaamijyada taranka. Qalabkani wuxuu aruuriyaa macluumaadka ka yimid tags, cinwaanka, goobaha qiimaha iyo kuugu soo baxa xogta si fiican loo xoqay gudahood dhowr daqiiqo.
4. Abuuri Xaaladaha Safarada XML
Faa'iido kale oo loo adeegsado isticmaalka Spider Spider Tool waa in ay dhalinaysaa calaamadaha XML ee loogu talagalay dadka isticmaala waxayna ku yimaadaan qalab dhisme oo heer sare ah. Waxaad bedeli kartaa xawaaraha iyo xawaaraha xawaaraha ee boggaaga iyo helitaanka rikoodhada isla markiiba soo hagaagay. Waxaa intaa dheer, qalabkan wuxuu bixiyaa shaxsooyin sitaha kala duwan si ay u kala doortaan.
5. Isku-dubaridka Hantidhowrka Google Analytics
Waxaad isku xiri kartaa ama isku-dari kartaa Qeybta SEO Spider Tool oo koontadaada Google Analytics iyo in aad soo gudbiso macluumaad faa'iido leh, hagaajinta qiyaasta qashinka, wada sheekeysiga, iyo kalfadhiyada boggaaga. Marka xogta si buuxda loo soo saaro, qalabkani waa la daabacaa wuxuuna kaa caawin doonaa inaad abuurto dakhliyada internetka.
6. Dib-u-eegista Rootiyada iyo Dariiqyada
Hadda way fududahay qof kasta inuu eego URL-yada ay xireen robots. Qt, Diraasadaha X-Robot-yada iyo robot-yada metadee, taas oo u mahadcelisey Qalabka Spider Spider si loo suurtageliyo. Wuxuu si toos ah u hagaajiyaa URL-yada jaban, isla markaana si dhakhso ah ayaad u heshaa.
7. Raadi Macluumaadka Kaqaybsan
Waxaad si sahlan u ogaan kartaa boggaga internetka ee shabakadda internetka iyadoo la adeegsanayo Nidaamka Spider Spider. Qodobbada qayb ahaan lagu duubay ayaa si dhakhso ah loo dayactiray. Qalabka Spider Spider ayaa hubinaya cinwaanada boggaaga, content iyo sharaxaada tayada, inaad hubiso in midna boggaga internetka lagu sawiro shabakada.
8. Kormeeraha tartanka
Haddii aad rabto inaad kormeerto goobta tartankaaga aadna doonayso inaad fahamto nooca xogta uu ku xoqay, waa inaad isku daydaa SEO Spider Tool. Kani waa keli ah duubista shabakadda iyo barnaamijka xog-ururinta xogta oo kuu ogolaanaysa inaad isbarbardhigto rikoodhadaada tartamayaasha waxayna ku siinaysaa macluumaad faa'iido leh isla markiiba Source .